विकासका योजना सिक्न भक्तपुर जानुहोस् ! – Everest Dainik – News from Nepal
विकासका योजना सिक्न भक्तपुर जानुहोस् !
भक्तपुर, साउन १९ । शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थित सहर निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गरेका नमुना कामहरू हेर्न देशभरका जनप्रतिनिधि अहिले भक्तपुर नगरपालिकाको अवलोकनमा आउन थालेका छन् ।
सिसडोल डम्पिङसाइटमा थोरै मात्र समस्या आउँदा काठमाडौं र ललितपुर महानगर मात्रै होइन, बनेपा नगरपालिकासमेत फोहोरले दुर्गन्धित बन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै छ, भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायत समग्र विकासमा भक्तपुर नगरपालिका नमुना बनेको छ । आखिर भक्तपुरले अन्य स्थानीय तहले गर्न नसकेको राम्रो काम के गरेको छ ? अरूले सिक्नैपर्ने के गरेको छ भक्तपुरले ?
सरसफाइः नगरको फोहोर नगरभित्रै मोहरमा बदल्दै
शिक्षाः नगरकै सात कलेज, इन्जिनियरिङ पढ्नेलाई ५० प्रतिशत छुट
स्वास्थ्यः घरघरमा निःशुल्क नर्सिङ सेवा, ५० रुपैयाँमा विशेषज्ञ सेवा
बालबालिकाः मासिक पाँच सय रुपैयाँमा शिशु स्याहार
बजारः दैनिक अनुगमन
सम्पदा पुनर्निर्माणः ४७ योजनामा २७ पूरा भइसके
एनजिओ निषेधः नगर क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थामुक्त गर्ने नीति
खेलकुदः युवालाई विभिन्न खेलको तालिम
संस्कृति संरक्षणः सांस्कृतिक कला सिकाउँदै
कानुन निर्माणः संविधानसँग नबाझिने गरी नगरको आफ्नै कानुन
पुस्तकालयः आधुनिक पुस्तकालय सञ्चालन, निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: Bhaktapur nagarpalika
कावासोतीमा सेनाको बस दुर्घटना, १७ जना घाइते